TOKONY HO VOAVAHA AO ANATIN’NY TETEZAMITA NY 85%-N’NY OLANA AO ANATIN’NY MINISTERA
Ny 30 martsa lasa teo no nandray ny toeran’ny maha-Minisitry ny fampianarana teknika sy fampianarana araka asa azy ny Minisitra Ngolo Gilbert. Dimy volana izao, araka izany, no nandraisany izany toerana izany. Inona no zava-bita sy ny fanavaozana nentiny manodidina ny fampianarana teknika tao anatin’izay roa volana izay. Indro ny resadresaka manokana nifanaovanay tamin’ny Minisitra Ngolo Gilbert teny amin’ny toeram-piasany.
Nanouh (N): Inona Atoa Minisitra ny fanatsarana nentinao teo anivon’ny fampianarana araka asa tao anatin’izay dimy volana nitantananao izao.
Ngolo Gilbert (NG): Anisan’ny fanatsarana ny fampianarana teknika ny nanaovanay ny karazana “reforme” na zaikabe, nentina nandinihana ny fanatsarana ny fampianarana teknika. Tao anatin’izany ihany koa no nijerena izay vato misakana mety tsy hampandroso ny fampianarana teknika. Ny 20 May teo no nanaovana azy io ary nandraisan’ireo mpitantana sekoly sy ireo tompon’andraikitra misahana sekoly ary ireo mpiandraikitra fikambanana anjara. Ny vali’nio fivoriambe io dia efa nalefa tany amin’ny mpamatsy vola. Ankoatra izany, dianataonay vaindohan-draharaha ihany koa ny fijerena ny fampianarana teknika eny anivon’ny Faritra tsirairay. Ny anton’izany dia ahafahana manara-maso sy miara-miasa amin’ireo tompon’andraikitra eny anivon’ny Faritra. Natsaraina ihany koa ireo fitaovana enti-miasa na enti-mampianatra. Asan’ny Faritra efa nandalovanay ny tany Mahajanga, Fandriana, ntsirabe, Morondava, Toliara. Ato ho ato kosa no hanaovana ny any Fianarantsoa hatrany Ihosy sy Ambatofinandrahana.
N: Inona no olana hitanao teny anivon’ny Faritra?
NG: Ny Faritra dia samy manana ny zavatra mampiavaka azy. Ihatra fotsiny ny ao Ambatofinandrahana, izay malaza amin’ny “marbre”. Tokony hasongadina izay zavatra mampalaza ny faritra tsirairay. Apetraka any amin’ny Faritra avy ny lalam-piofanana ahafahan’ireo tanora mivelatra bebe kokoa amin’ny harena ananany. Tokony omena any toerany ihany koa ny fiofanana araka asa ho an’ireo olona manao ny asa madinika toy ny “plomberie”. Mbola maro ny zavatra tsy mety ary mila fanamboarana, mila finiavana anefa izany. Ny tonajona dia mba hampiodina tsar any Ministera amin’ny Repoblika faha-4. TOkony ho voavaha ato anatin’ny tetezamita avokoa ny 85%n’ny olana.
N: Inona no ezaka ataonareo ahatongavana amin’izany?
NG: Hampitomboina sy aparitaka manerana ny Nosy ny foibem-toeram-piofanana any amin’ny Faritra. Amin’izao fotoana dia efa 13 no isan’izy ireo izay ezahina ho 16 amin’ity taona ity. Eo amin’ny 60 kosa ny “lycée” sy “centres” manerana ny Nosy. Marihina fa hatramin’ny faran’ny taona no hanatanterahana ireo ezaka ireo. Ao anatin’ny ezaka ihany koa ny hanaovana ny “validation des acquis” izay atomboka ato ho ato. Izy io dia fandrefesana sy fanekena ny traikefa ananan’ny olona, izay tsy nahavita ny dingana faratampony.
N: Ny teninao farany?
NG: Tsy maika, tsy tara nefa mandroso izay no tanjon’ny Ministeran’ny fampianarana teknika sy fampianarana araka asa.
Ny Minisitry ny fampianaeana teknika sy fampianarana araka asa, Ngolo Gilbert. (Sary : Nanouh)